Tallaalada | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dugsiyadeenu waxay ka qayb galaan barnaamijka "No Shots, No School". Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay keenaan caddeyn tallaal , ama dukumentiyo habboon oo ka reebaya ardayga tallaalkaas, iyo xogta kale ee lagama maarmaanka u ah hubinta in ardaygu ka madax bannaan yahay cudurrada la is qaadsiiyo, iyadoo ay tahay xaalad isqoritaan. Haddii ilmahaagu ka maqanyahay wax tallaal ah, fadlan ballan la samee daryeel caafimaad bixiyahaaga si loo dhammaystiro dhammaan tallaallada ka hor intaan dugsigu bilaabmin.
YAA U BAAHAN TALLAALO, GOORMA?
Diiwaanka tallaalka ilmahaaga waa inuu ku jiraa faylka dugsiga ka hor inta aanu ilmahaagu iman. Markii aad iska diiwaangeliso Xannaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento macluumaadka tallaalka, foomka ka-cafiska caafimaad ama foomka ka-dhaafitaanka caafimaad ee aan nootaayo la aqoonsan yahay. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Diiwaangelinta ee Degmada markii aad isdiiwaangeliso. Cusbooneysiinta ayaa looga baahan yahay fasalka Toddobaad.
WIXII TILMAAMO AH OO LOO BAAHAN YAHAY
Badbaadada carruurta oo dhan, sharciga Minnesota wuxuu u baahan yahay caddeyn qoran oo ah in ilmahaaga laga tallaalay toddobo cudur: gawracato, teetanada, xiiq-dheerta (DTP), jadeecada, qaamo-qashi, rubella (MMR) iyo dabaysha. Caruurta galeysa Xanaanada waa in sidoo kale laga talaalaa cudurka busbuska (bus bus) iyo taxane ah seddex cirbadood oo cagaarshowga B ah. Markii aad iska diiwaangeliso Xannaanada, waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento macluumaadka tallaalka, foomka ka-cafiska caafimaad ama foomka ka-dhaafitaanka caafimaad ee aan nootaayo la aqoonsan yahay. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad siiso nuqul ka mid ah macluumaadkan Xafiiska Diiwaangelinta ee Degmada markii aad isdiiwaangeliso; fadlan soo gudbi macluumaadka kahor Ogosto 1.
Soo dejiso hagaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ama la tasho dhaqtarka qoyskaaga maxaa yeelay waxaa loo baahan karaa waxyaabo kor u qaada.
Canugaaga ma dhigan karo iskuulka ilaa laga cusbooneysiiyo macluumaadka talaalka. Haddii ilmahaagu haysto sabab caafimaad oo uusan u qaadanaynin tallaallada, waxaa loo baahan yahay qoraal uu saxiixay dhakhtarkaaga ama rugta caafimaad. Qoysaska diida talaalka waa inay bixiyaan foomka goynta nootaayo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir xafiiska caafimaadka dugsigaaga.
NAGU SOO JEEDA INAGAGA QABATO ARIMAHA KALE EE CAAFIMAAD
Haddii ilmahaagu qabo wax xasaasiyad ah, xaalado caafimaad ama shaqsi iyo / ama qorshooyin daryeel caafimaad oo degdeg ah, fadlan la socodsii xafiiska caafimaadka ilmahaaga macluumaadkaas.
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota
Adeegyada Caafimaadka /